संस्था परिचय – नेपाली साहित्य मंच
समयको परिर्वन सगैं हाम्रो गौरवशाली नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वब्यापी गर्दै
जानुपर्ने आवश्यकता दिनानुदिन वढदै गएको सर्न्दर्भमा एउटा विशुद्ध साहित्यिक मञ्च
मार्फत “नेपाली साहित्य घर” को रुपमा यस www.nepaliliterature.com तत्काल sahitya.org.np र sahityaGhar.com लाई संचालन गरिएको हो ।
स्रष्टा देशमा हुन या विदेशमा उनीहरुले सिर्जना गर्न छोड्नु हुदैन, नेपाली भएर नेपाली भाषा साहित्य अनि नेपालको विविधता अर्न्तगत विभिन्न जातिहरुको भाषा साहित्य बिर्सनु हुन्न । नेपाली भाषा लगायत सबै
जातजातिको भाषा सम्पन्न भए मात्र पूर्ण राष्ट्रियता बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
हामी हाम्रो राष्ट्रियताको लागी
जुनसुकै चुनौती सामना गर्न तयार हुनुपर्छ र तयार छौ । नेपाली भाषालाई आज सिमित
भूगोलले छेक्न सक्दैन । अझ विश्वब्यापी वेभ साइटको विकास र पहुचले सारा विश्व
साँघुरो बनेको छ । यो साँघुरो, सानो विश्वलाई नेपालीमय बनाउन प्रसासरत रहने हाम्रो
चाहना हो ।
घरदेशमा सबै कुरा सामान्य लाग्दछ । जब विश्व चिन्तनमा हुन्छौ निश्चय नै हामीलाई
लाग्दछ अर्न्तराष्ट्रिय भाषा अग्रेजी, स्पानिस, फेन्च चाईनिज भाषा सरह अर्थात त्यो
भन्दा सम्पन्न हाम्रो नेपाली भाषा बन्न सकोस । यी हाम्रा चाहना पूरा होला नहोला त्यो आफ्नै ठाँउमा छ तर नेपाली साहित्यको उज्वल भविश्य बनाउनको लागि आजको
न्युनतम काम मध्ये नेपाली साहित्यको वेभसाइट संचालन गर्नु एक हो । हाल नेपाली
भाषीहरु संसारको प्रायः प्रत्येक मुलुकमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती सवै मुलुकका अधिकांश नेपालीहरुले वेभसाइट घुम्ने, हेर्ने पंहूच राख्दछन ।
विश्वका जुनसुकै भागमा रहेका नेपालीहरुले सम्पूर्ण नेपाली साहित्य इन्टरनेटमै सजिलै संग हेर्नसकुन ।
स्रष्टाहरुको सिर्जना ओईलाउन नपाओस, नेपाली भाषा र साहित्य विकासको गतिलाई
निरन्तरता पुग्न सकोस भन्ने पवित्र लक्ष्य राखी यो वेभसाइट निर्माण गरि संचालन
गरिएको छ । यो वेभसाइट कुनै ब्यापारीक प्रयोजनको लागी नभइ यो सेवामुलक साइट हो ।
… गरि सहयोग अभिवृद्धि गर्ने ।
७. यस मंचले “विश्वब्यापी रेडियो गजल प्रतियोगिता २०६६” सह-आयोजकको हैसियतबाट आयोजना सम्पन्न गर्यो । विश्वका विभिन्न १८ मुलुकबाट र नेपालको ३८ जिल्लाबाट जम्मा १७७ जना प्रतियोगिले सहभागिता जनाएका थिए । गजल सुन्न यहाँ जानुहोस >>
के हो उखान-टुक्का ?
४ मुक्तक – मोहन आचार्य जलद
उपन्यास “रुदिना” र शिव प्रधान – चन्द्र मादेन आन्छन
मुन्ठाइको सगुन – टेक बहादुर थापा